Miakatra ny vidim-piainana : Tsy voafehin’ny governemanta Ntsay -
AccueilSosialyMiakatra ny vidim-piainana : Tsy voafehin’ny governemanta Ntsay
Miakatra ny vidim-piainana : Tsy voafehin’ny governemanta Ntsay
07/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Efa mihoatra ny loha. Tsy takona hafenina ankehitriny ny fidangan’ny vidim-piainana. Indrindra moa fa nahitana fiakarana 50 Ar isaka ny litatra indray ny vidin-tsolika.
Hatreto, ary hatramin’ny nipetrahana sy nitantanan’ity governemantan’ny praiminisitra Ntsay Christian ity, toa mitazam-potsiny ny fiainam-bahoaka, ary mbola tsy nandray fanapahan-kevitra sy nitady vahaolana ny amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka mihitsy.
Voaporofo tokoa amin’izao fotoana izao fa manao “bemarenina” sy manao “masobe tsy mahita” ny governemanta manomboka any amin’ny lehibeny, Ntsay Christian. Niakatra vao tsy ela akory izay, izany hoe, tamin’ny fiandohan’ny volana desambra teo ny vidin’ny solika, efa miakatra tsikelikely manaraka izany koa ny vidin’entana eny an-tsena, eny fa na mbola tsy miakatra akory aza ny saran-dalana. Izany hoe, tsy misy ny fanaraha-maso ataon’ny Fanjakana amin’ireo mpanararaotra amin’ny vidin’entana ankehitriny. Samy manao izay saim-pantany ireo mpivarotra entana ilaina andavanandro (PPN). Ao ny manararaotra ny fisondrotry ny vidin’ny solika, ka mampidangana avy hatrany ny vidin’ny entana ao aminy. Ao kosa anefa ireo mba mitsinjo ny fiainam-bahoaka ihany, ka mbola mitazona ireo vidin’entana mahazatra hatramin’izay…
Tsy misy na inona na inona nataon’ity governemanta Ntsay Christian ity, afa-tsy ny nihazakazaka nanao sy nanatanteraka amboletra ny fifidianana amin’izao vainm-potoan’ny orana izao. Izy ireo rahateo no nanambara tamin’ny alalana minisitra, mpikambana eo anivon’ny governemanta, vitsivitsy fa tsy misy hiraharahian’izy ireo izay fiainam-bahoaka, fa ny fikarakara fifidianana ihany no nametrahana sy iraka ampanaovina azy ireo. Izany ve no mba toe-tsain’ny mpitondra eto amin’ny firenena? Toa mifandrafy amin’ny mpiray tanindrazana indray fa tsy mijery sy mitsinjo ny mpiara-belona ity governemanta Ntsay Christian ity. Hodian-tsy hita ny fikaikaikan’ny vahoaka, ary manao fanahy iniana manome lamosina ny olana misy eto amin’ny firenena.
Saingy, raha fanamparam-pahefana dia mitana ny lohany ity governemanta Ntsay Christian ity. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny tsy firaharahian’ny praiminisitra ilay zaza nodonin’ny kôrteziny tetsy Ankorondrano, ireo roalahy nikasi-tanana mpisolovava, ny fanamparam-pahefana eny anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, sns.
Raharaha « 500 millions Ariary » : Tsy afa-bela i Orlando Robimanana